NUWACO oo $20,000 oo dollar ku wareejisay Guddiga Nalalgalinta Airport-ka Garoowe – Nuwaco
Shirgada biyaha NUWACOO ayaa guddiga nalal galinta garoonka diyaaradaha Garowe ku wareejisay lacag dhan $20,000, lacagtaas oo ah qoondada shirkadau uga qeyb qaadanayso dhismaha garoonka diyaaradaha Garowe.
Xaflad kooban oo ka dhacday xarunta Shirgada ee magaalada Garoowe ayaa lacagtaan lagu wareejiyey guddiga lacagtaan waxaana goobjoog ka ahaa Gudoomiye kuxigeenka degmada,xoghaya dowladda hoose,guddiga nalalgalinta garoonka iyo masuuliyiinta shirgada NUWACO.
Cismaan Guureeye Kaarshe oo katirsan guddiga sare ee NUWACO ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay bixiyaan qoondadii shirkadooda lagusoo qoray ee looga qeyb qaadanayo iftiiminta garoonka diyaaradaha Garowe oo dhismihiisu meel gabo gabo ah marayo.
Cismaan Guureeye ayaa sheegay ka qeyb qaadashada dhismaha garoonka diyaaradaha Garowe inay tahay arrin horseedaysa in la gaaro horumar iyo in dadku wax badan si wadajir ah u qabsadaan.
Guddoomiyaha guddiga dhaqaale aruurinta garoonka Garowe, Cabdifitaax Kismaayo ayaa shirgadda biyaha NUWACO KU amaanay inay kasoo baxeen balanqaadkoodii laga sugayay waxaana uu shirgadaha kale ugu baaqay inay ku daydaan.
Cabdifitaax Kismaayo ayaa sheegay dhismaha garoonka diyaaradaha Garowe inuu meel fiican marayo, islamarkaana bisha 11-aad si rasmi ah xariga looga jaridoona, laakiin wuxuu dhaliilay inaaan weli sidii loo baahnaa loogasoo jawaabin qaaraanka garoonka, wuxuuna shirkadaha iyo shakhsiyaadka qoondada lagusoo qoray ugu baaqay inay bixiyaan lacagta qaaraanka.
Gudoomiye kuxigeenka duqa degmada Garoowe Cismaan Towxiid ayaa ku bogaadiyey shirgadda biyaha NUWACO sida ay marwalba diyaar ugu tahay inay ka qaybqaadato horumarinta magaalada isagoona ku amaanay inay ka soo baxeen balankii ay qaadeen.